Polyethylene HDPE na -egbochi mpempe akwụkwọ rọba agba
Kedu nke bụ/ nha nha nke ihe mgbochi nkụnye eji isi mee hdpe?
5mm/0.2 ″ inch,
10mm/0.4 ″ anụ ọhịa,
20mm/0.8 ″ anụ ọhịa,
50mm/2 ″ anụ ọhịa,
100mm/4 ″ anụ ọhịa
1000*1000mm/40 ″ inch*40 ″ inch,
1000*2000mm/40 ″ inch*80 ″ inch,
1000*3000mm/40 ″ inch*120 ″ inch,
2000*2000mm/80 ″ inch*80 ″ inch,
4x8ft/ 1m x 2m Light Ọrụ Turf Grassland Nchedo okporo ụzọ nwa oge
HDPE Ground Protection Mat na -adịgide adịgide, dị arọ ma sie ike. A na -ahazi akwa akwa HDPE iji nye nchebe ala na ịnweta n'elu ala dị nro ma ga -enye ntọala nkwado siri ike na traction maka ọtụtụ ọrụ. Nhọrọ dị elu karịa plywood na nchara, ụzọ akwa plastik na -echebe ala agaghị emebi, ire ere, ịgbawa, delaminate ma ọ bụ banye kemịkal na -emerụ ahụ. A na -eji akwa HDPE eme ihe mkpuchi ala.
Ichekwa nnukwu nchekwa ala nchekwa akwa nwa oge maka owuwu ya
Hongbao - mpempe akwụkwọ plastik
2.Clor: Black, Yellow ma ọ bụ ahaziri.
6.Samples Time: 5 ~ 7 ụbọchị
7.OEM Nabatara Ee.
8.Certification dị: Ee. SGS; ISO9001: 2008
9.PackingDetails: pallet na strech film, ahaziri osisi ikpe, katọn, ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka arịrịọ.
10.Production ikike: 3,00 tọn kwa ọnwa.
11.Payment Okwu: L/C, T/TD/P, D/A, PAYPAL, WESTERN UNION, EGO GRAM.
Yiri mpempe akwụkwọ UHMWPE na -amaghị nwoke 100%
1, ISO9001: Asambodo Ogo 2008
2, Ezi na -eguzogide;
3, ezigbo lubracation;
4, Low okpomọkụ na -eguzogide;
5, ntinye mmiri na -abụghị mmiri, osisi na -enweghị osisi;
6, ukwuu corrosion eguzogide, wdg
7, Ntinye ngwa ngwa: mgbakọ ngwa ngwa/disassembly n'ime na n'èzí.
8, Ọnụ ego dị ala: ụgwọ ọrụ na mmezi dị ala. Ihe oru ngo na -efu 1/5 ya na ezigbo akpụrụ mmiri. Ọ dịghị achọ friji na ice. Jiri n'ebe ọ bụla na ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
9, ịkwọ ụgbọ mmiri dị mfe: eke ice na -eme ahụmịhe yiri ya
Mpempe akwụkwọ Polyethylene Ultra Molecular Weight (UHMW-PE)
1, Ezi nguzogide abrasion
2, Ezi ọnọdụ dị ala na -emetụta nguzogide, ọbụlagodi mgbe ịnọ - mgbago ogo 180
3, ezigbo akụrụngwa eletriki, nnabata mmiri dị ala
4, ike mmetụta dị elu, ezigbo ike, ọ bụ polyethylene nkịtị 200 ugboro
5, Ibu ahụ dị nfe, ahụike anaghị egbu egbu
6, Nguzogide nke corrosion kemịkalụ, ezigbo ike igwe zuru oke, enwere ike iji ya ebe mmepụta ihe, wdg
“HONGBAO” Akụkụ CNC Ejiri Polyethylene Borated
Pee ihe borated polyethylene cnc akụkụ
Akụkụ PE ihe polyethylene gbara agba na -ewu ewu na mba ofesi, gbochie radieshon neutron ma ọ bụ gbochie radieshon, nwere ike gbochie radieshon nke mbibi ezinụlọ ha na ọha mmadụ, nchedo radieshon, radieshon na iche nwere uru dị iche iche nke efere polyethylene n'otu oge.
Akụkụ CNC Ejiri Boet polyethylene Borated Dị ka Esere
ọkpụrụkpụ nha omenala na ọdịnaya nwere ibu site na ịdị arọ avaliable ịdị elu nke ukwuu uhmwpe borated polyethylene sheet for neutron shielding
Polyethylene Borated bụ ngwaahịa emebere nke ọma maka mkpuchi radieshon nwere ịdị arọ na ọdịnaya hydrogen dị elu site na 3% ruo 50%. Emere ya ka o zute ngwa niile dị mkpa maka ebe a na -agwọ ọrịa kansa, nyocha na akụrụngwa ụlọ ọgwụ. Ngwa gụnyere ngwangwa ngagharị, ngwa agha nuklia ma ọ bụ radieshon, iji ụlọ ọrụ, nchekwa dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na nchekwa ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ mmiri okpuru mmiri nuklia, osisi ike nuklia, nchedo ókèala yana ngwa ndị ọzọ chọrọ iwelata ikuku neutrons.
Mpempe akwụkwọ HDPE: Anyị nwere ike rụpụta mpempe akwụkwọ HDPE dị ka ihe dị iche iche chọrọ site na ngwa dị iche iche .Dị ka mgbochi UV, ọkụ na-eguzogide, mgbochi na ihe odide ndị ọzọ. Ọdịmma kacha mma na elu na agba dị mma na -eme ka mpempe akwụkwọ plastik Injin anyị na -ewu ewu n'ụwa niile.